Tantaram-pitiavana Syriana’ Manaraka Ny Fiainana Andavanandron’ny Fianakaviana Iray Nandritra ny Ady sy an-tSesintany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2015 8:21 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Swahili, Français, Nederlands, Ελληνικά, English
Horonantsary vaovao manaraka fianakaviana Syriana iray nandritra ny dimy taonan'ny korontana. Sary: Mpamokatra sarimihetsika Sean McAllister.
Ity lahatsary sy tatitra amin'ny onjam-peo avy amin'i Leo Hornak ho an'ny The World ity dia navoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 24 Septambra 2015 ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Sarotra takarina ny hagoavan'ny loza manjò ny Syriana: olona mihoatra ny 200.000 no maty, 6 tapitrisa nafindra toerana anatiny, 3 tapitrisa hafa monina toy ny mpitsoa-ponenana.
Ankehitriny, mikasa hampahafantatra ireo voka-dratsy manokan'ny ady teo amin'ny olon-tsotra ny sarimihetsika vaovao iray nahazo loka.
Nanomboka tamin'ny taoan 2009, talohan'ny ady amin'izao fotoana izao, naka sary ny fiainana andavanandron'ny fianakaviana iray monina ao Damaskosy ilay mpanao sarimihetsika Britanika, Sean McAllister.
Nihaona voalohany ary raiki-pitia tamin'izy ireo gadra politika tao amin'ny efitry ny fonja Syriana i Amer Daoud sy ny vadiny Raghda Hassan, 15 taona lasa izay. Nivady izy ireo taorian'ny famotsorana azy ireo ary nanangana fianakaviana.
Narahan'ny fankatsarin'i McAllistery izy ireo sy ny zanak'izy ireo isaky misy ny dingan'ny revolisiona tao Syria, ny ady an-trano sy ny fandefasana an-tsesitany ny fianakaviana tany Eoropa. Antsoina hoe “Tantaram-pitiavana Syriana” ny vokatry ny fanadihadiana.
Nilaza i McAllister fa efa nanomboka nanatontosa horonantsarin'ny fianakaviana tamin'ny fanombohan'ny revolisiona. “Nahazo antso hoe: ‘Fantatrao ve? Manomboka ny ao Syria! ‘- i Amer sy ny zanany lahy Kaka no olona voalohany teny an-dalana, ary samy voasambotra izy mianaka. “
Navotsotra ihany ireto fianakaviana noho ny farany, saingy voasambotra i Sean ary nogadraina tao amin'ny fonja Syriana nandritra ny herinandro. Vokatr'izany, fantatry ny manampahefana ny olona nanatontosa ny horonantsary ary nalefa an-tsesintany an-katerena ho fiarovana azy ireo manokana i Amer, Raghda sy ny zanak'izy ireo.
Satria niezaka ho zatra ao amin'ny firenena vaovao sy tontolo vaovao ny fianakaviana, manomboka mitoetra eo amin'ny fanambadian'i Amer sy Raghda ny teritery.
Na dia eo aza ny fijaliana asehoan'izany, mbola mahita ny horonantsariny toy ny fanantenana farany i McAllister: “Mihevitra aho fa ao anatin'ny fanamby ny hafatry ny fanantenana – ny fihantsiana fianakaviana iray, izay tafarina.”
Mino izy fa zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny horonantsary izay mampiseho ny maha-olona ny mpifindra monina sy ny mpitsoa-ponenana. “Hitantsika ao amin'ny fahitalavitra ny olona lavo naloan'ny ranomasina. Manome feo ho an'ireo olona rehetra hitanao amin'ny vaovao i Amer sy Raghda “.